Axmed Karaash oo Dhalinyaro Nuur Axmed ah Ku Xasuuqay Tukaraq (updated) – make music movie Edition: International | Video
Published On: 5 June 2012 3:58 pm Editors Choice / Wararka | By Taleex Media Axmed Karaash oo Dhalinyaro Nuur Axmed ah Ku Xasuuqay Tukaraq (updated)
Qax caawa ka bilawday Tukaraq ka dib dilkii fulaynimaada ahaa ee Axmed Karaash gaystay.
12kii habeenimo xalay waxaa weerarka soo qaaday laba gaadhi oo kuwa dagaalka ah oo ay wateen maleeshiyada Axmed Karaash
Labada gaadhi mid waxaa leh Axmed Xasan Qaal oo ay isku qoys yihiin Axmed Karaash mid ka kalana waxaa uu ka mid yahay gawaadhidii qurbajooga Naaleye Axmed iibiyeen 2007 ee uu la wareegay Axmed Karaash.
Dhaawaca waxaa ka mid ah Guray Cabdilaahi Foorteen.
Axmed Karaash oo qirtay in uu isagu dilay Axmed Juqdhaw ka dib markii uu u yimi odayaasha Nuur Axmed kuna yidhi “ninka dhintay anagaa qabna, xaqiisana waan bixinaynaa”, hase ahaate odayasha Nuur Axmed ayaa ugu jawaabay in uu marka hore soo dhiibo gacan ku dhiiglaha taaos uu diiday Axmed Karaash.
Wararka aanu ka helayno magaalada Tukaraq ayaa sheegaya in goor dambe xalay uu weerar gaadmo ah ay qaadeen maleeshiyada Axmed Karaash ee ka soo jeeda degmada Xudun.
Weerarkan ayaa ay ku qaadeen xarunta booliska Tukaraq halkaas oo ay ku sugnaayen ciidamo degaanka Tukaraq ka soo jeeda gaar ahaan beesha ee Nuur Axmed.
Sida uu ku soo waramaya wariyahayaga oo ku sugan magaalada Tukaraq waxaa weerarkaasi gaadmada ahaa lagu dilay Alle ha u naxariistee Axmed Juqdhaw iyadoo tiro kalana lagu dhaawacay.
Marxuumka dhintay waxaa ay walaalo ahayeen Alle u ha u naxariistee Saleebaan Juqdhaw oo lagu dilay Gambadhe bishii April ee sanadkan xiligaas oo uu ka gurmada magaalada Tukaraq isagoo ka mid ahaa ciidan u gurmaday si ay Axmed Karaash uga reebaan Mahad Cambaashe oo baacsanayay maleehsiyaad badana ka qabsaday iyo gaadiid balse Axmed Karaasha uga abaal guday in uu gaadmo ku laayo dadkii u dartii u dhintay ehelkoodii.
Axmed Karaasha ayaa shalay aroor isku dayay in uu kala wareego kastamka Tukaraq booliska Tukaraq hase ahaate ay dib isaga caabiyeen balse xalay soo qaaday weerar gaadmo ah.
Magaalada Tukaraq ayaa hada laga dareemayaa xiisad colaadeed iyadoo maleeshiyaadka Axmed Karaasha la haybta ah iyo kuwa Nuur Axmed ay isu hub uruursanayaan mana jirto cid ka dhex wada dhexdhexaadin ah.
Oday ka mid ah odayaasha degaanka Tukaraq ayaa Taleex Media u sheegay in weerarka xalay ay u fasirteen duulaan ay ku soo qaday beesha Axmed Karaash sidaa darteedna ay diyaar u yihin sidii ay isaga caabin lahaayeen.
Maleeshiyada Axmed Karaash wato oo ka soo jeeda beeshiisa ayaa horay loogu tuhunsanaa in ay qayb weyn ka qaatene dilkii Alle ha u naxriistee Kayse Muuse Deri ee lagu dilay magaalada Taleex xiligii la qabanayay shirkii Taleex.
Sido kale beesha Nuur Axmed ayaa waxaa ay tuhun san tahay in Axmed Karaash lug ku lahaa qorshihii lagu dilay Alle ha u naxariistee Jaamac Aw Cali Shire iyo Mubaarik Salaax Aw Cali Shire maadama maleeshiyadiisu ay kaalin weyn ka qaateen baxsashadii dhalinyaradii dilka gaysatay.
Xalada Tukaraq waa qasan tahay xili kastana waxaa qarxi kara dagaal u dhexeeya maleshiyaadka beesha Nuur Axmed iyo kuwa Axmed Karaash la haybta ah ee uu isagu hogaaminayo.
Wixii war ah ee ka soo kordha kala soco Taleex Media Related Articles